basic of C# (part 11) | our notes for our youngers
basic of C# (part 11)
Filed under: Basic of C# — Tags: .NET, C#, function, parameter passing, programming — sevenlamp @ 5:35 PM
Parameter passing ဆိုတာဘာလဲ အရင်ပြောပြမယ်နော်၊ ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ function တွေကိုဖြစ်စေ၊ library ထဲမှာ ရှိပြီးသား predefined function တွေကိုဖြစ်စေ ခေါ်သုံးတော့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ function definition မှာ ကြေငြာထားတဲ့ argument(parameger) တွေကို ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့လို function call မှာ parameter တွေထည့်ပေးတာကို parameter passing လို့ ခေါ်တာပါ။ C# မှာ parameter passing ၄ မျိုးရှိပါတယ်။
3. Output Parameter နဲ့
4. Params Array တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
1)	Value Passing
C# မှာ default parameter passing က value pass ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ function ထဲကို parameter ပေးလိုက်တာက actual value ကို copy တစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် function အတွင်းမှာ အဲ့ဒီ value ကို ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ နဂို value တော့ ပြောင်းသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ..
Console.WriteLine("before : " + num);
Console.WriteLine("after : " + num);
static void Inc(int num)
after : 10
2)	Reference Passing
ကျွန်တော်က Inc function ထဲမှာ ပြောင်းလိုက်တဲ့ တန်ဖိုးကို main function ထဲမှာပါ လိုက်ပြီး ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ reference pass လုပ်ပေးရပါမယ်။ reference pass လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ref keyword လေးကို parameter ရဲ့ရှေ့မှာ ထည့်ပြီး ရေးပေးရမှာပါ။ တချို့ reference data type(class, array) တွေကို parameter ပို့ရင်တော့ ref keyword မထည့်ပေးလည်း ရပါတယ်။
static void Inc(ref int num)
after : 11
3) output parameter
Output parameter က reference parameter နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် output parameter ဆိုတဲ့ အတိုင်း သူ့ကို output return ပြန်ချင်တဲ့ variable တွေအတွက် သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ function အတွင်းမှာ out variable ထဲကတန်ဖိုးကို assign မလုပ်သေးခင် ယူတွက်လို့မရပါဘူး။
int num = 10; int result;
Square(out result, num);
static void Square(out int result, int num)
4) Params Array
Function call မှာ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ value တွေကို array တစ်ခုအနေနဲ့ လက်ခံချင်တယ်ဆိုရင် params keyword ကိုသုံးရပါတယ်။ example လေးပဲ ကြည့်လိုက်တော့နော်။
Show(1, 3, 5, 7, 9);
static void Show(params int arr)
foreach (int x in arr)
ဒီ example လေးမှာ ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ parameter5လုံးကို array အနေနဲ့ လက်ခံသွားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
Please check again the two examples.I assume that examples are not concide with according lecture.
One is for output Parameter and the other is for Params Array.
Comment by swelin — September 23, 2009 @ 12:05 AM
hello ma swelin,
really thanks to your comment. now, i changed with the right examples.
please let me know, if something wrong in my other post. really really thanks to you.
Comment by sevenlamp — September 23, 2009 @ 9:54 AM